_50 शेड्स फ्रिड_को ट्रेलर। सिनेमाटोग्राफिक त्रयी बन्द हुन्छ। | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | किताबहरु, हाम्रो बारेमा, नोभेला, रोमान्स उपन्यास
अगाडि बढ्नुहोस्, मैले कुनै पनि पुस्तक पढेको छैन किनकि म इमानदारीसाथ पछिल्लो page० पृष्ठ प्राप्त गर्न सक्दिन। तर म तपाईंलाई सँधै चिन्न सक्नेछु को लागि योग्यता विश्वव्यापी सफलता पाठक र दर्शक दुबै हासिल गर्‍यो, यद्यपि पछिल्लो समान हुन सक्छ। को उपलब्धि EL जेम्स पुस्तक र चलचित्रहरूको बारेमा धेरै विवादास्पद धारणा विचार नगरिकन यो निश्चित रूपमा हटाउन सकिन्छ।
अब यो बुझाइएको छ को ट्रेलर Shad० शेडहरू स्वतन्त्र गरियो जसले सिनेमाटोग्राफिक त्रयी बन्द गर्दछ र त्यो अर्को महिनाको रिलीज हुन्छ फेब्रुअरी। म बनाउँछु समीक्षा त्यहाँ के छ र यसमा टिप्पणी गर्न जारी राख्दछ फिल्म अनुकूलन भन्दा बढि बेचिएको छ कि यी शीर्षक को २१ लाख प्रतिहरू विश्व भरि। यसमा ताराring्कन राख्नुहोस् डकोटा जॉनसन y जेमी Dornan.
र, अहिलेको लागि, त्यो अहिले भइरहेको छ एउटा सामान्य काल्पनिकमा के छ अनास्तासिया स्टीलको विवाहको पोशाक श्री ग्रेलाई उनको विवाहमा। वा कमसेकम यो हो के सबैभन्दा खडा छ नेट मा हेडलाइन्स को एक राम्रो भाग मा।
लाग्छ कि सौंदर्यशास्त्र र सबै भन्दा बढि विवरणहरू यस त्रयीको पृष्ठभूमि वा कहानी माथि उठ्न जारी छ। र के पनि एक प्रकारको देखिन्थ्यो यौन क्रान्ति पनि कमजोर छ त्यो विरोधाभासपूर्ण क्लासिक छविमा त्यो अनुकूलनको बन्द सुरु गर्न छनौट गरिएको छ।
यो पनि त्यो अन्त्य हो कि भन्न गरौं पारंपरिक एक जसले यौन तत्वहरूको उपन्यास बिन्दु हाइलाइट गर्नेहरूलाई अचम्मित पार्दछ «साधारण» सबै भन्दा साधारण रोमान्टिक साहित्य मा र आम जनता द्वारा खपत। तर गाथा, चरित्र, सेटिंग र षड्यन्त्रको धेरै मन पराउनेहरू निस्सन्देह भक्तिको साथ तिनीहरूलाई आनन्द उठाउन हुनेछ।
1 खैरो 50० शेड्स
2 Shad० शेडहरू गाढा
3 Shad० शेडहरू स्वतन्त्र गरियो
4 के हामी यसलाई देख्छौं?
वर्षमा प्रकाशित 2011, यो सबै एक थियो साहित्यिक घटना त्यो कायम राखिएको छ। स्थापीत हुनु सिएटल, एक त्रिकोषिको पहिलो किस्त हो किaको सम्बन्ध बताउँछ भर्खर ग्रुएडुएटेड विश्वविद्यालयको, अनास्तासिया स्टील, युवा व्यापार मोगलको साथ क्रिश्चियन ग्रे.
Su सफलता वा नवीनता: रोमान्स उपन्यासको क्लिचमा परिचय गर्नुहोस् स्पष्ट रूपमा कामुक दृश्यहरु को तत्व संग दासत्वबाट, ला डोमिनसिन र बुझाउने र सदोमासोकिस्मो। तर यी अवधारणाहरु मा एक को लागी को रूप मा धेरै बारीक र डिग्री शामेल।
Shad० शेडहरू गाढा
अनास्तासिया ग्रे संग टुक्रिने निर्णय गर्दछ आफ्नो कामुक सम्बन्ध छ र पनि द्वारा रूपहरु को दबाव अघि अँध्यारो रहस्य पीडित व्यापारीको। तर तिम्रो इच्छा उसको लागि उनी रोकिदिनन् र उनी पछि फर्कनु हुँदैन। जे होस्, आना त्यो भय terrible्कर विगतको बारेमा अझ बढी जान्दछन्। यी सबै शीर्षमा, उनी अगाडि महिलाहरूको क्रोध र ईर्ष्याको सामना गर्नुपर्दछ।
Shad० शेडहरू स्वतन्त्र गरियो
जब Anastasia एक प्राप्त गर्न को लागी संघर्ष ठूलो प्रतिबद्धता उसको पक्षमा, ईसाईले पहुँच गर्नेछ जब सम्म यो गुमाउन छैन। त्यसोभए उनीहरूसँग अन्ततः यो सबै छ: प्रेम, जोश र तपाईंको भविष्यको लागि असीम सम्भावनाहरू। तर आनालाई थाहा छ कि यो प्रेम सजिलो काम होइन। तपाईंले ग्रेको विलासी जीवनशैली आफ्नै पहिचानको साथ साझा गर्न सिक्नुपर्दछ। र इसाईले गर्नु पर्छ आफ्नो जुनून मा प्राप्त नियन्त्रणको लागि बाध्यकारी जब उनी आफ्नो भूतको प्रेतहरूसँग लडिरहे। तर आना सफल हुनेछ र हामीसँग छ क्लासिक खुशीको अन्त्य.
के हामी यसलाई देख्छौं?
को गाथा को मोहित र समर्पित प्रेमीहरु तिनीहरू पहिले नै फेब्रुअरी को लागि बैठकहरूको तालिका बनाउँदैछन्। र तपाइँको मनपर्ने पुस्तक श्रृंखला को कुनै राम्रो पाठक जस्तै, तपाइँ हुनेछ पेन्डि matches मिल्छ वा छैन के तपाईंले पढ्नु भएको छ। उसले के समाप्त भयो वा केको कमी छ र यसको बारेमा रिसन्टको बारेमा गुनासो गर्ने छ सबैभन्दा उग्र डिटेक्टरहरू, कि त्यहाँ पनि छन् र हुनेछ।
वास्तवमा, के म यो सागा को धेरै महसुस गर्न सक्षम भएको छ कि छ साझा क्षेत्रहरू छैनन् पाठकहरूको बीचमा स्टिल र ग्रे र उनीहरूलाई घृणा गर्नेहरूको सामु समर्पण गरियो। र त्यो पनि यसमा छ यस सृष्टि को योग्यता बेलायती लेखकबाट EL जेम्स. कसैलाई उदासीन छोडेको छैन। हामी सबैले सेक्स, ह्वाइप र गांठो पैसा र विलासिताद्वारा घेरिएका लागि एक चोटि हेरेका छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » रोमान्स उपन्यास » _50 शेड्स फ्रिड_को ट्रेलर। सिनेमाटोग्राफिक त्रयी बन्द हुन्छ।